टुँडिखेल नै रहेन भने ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार
टुँडिखेल नै रहेन भने ?
कार्तिक २२, २०७६ हिमेश
काठमाडौँ — टेबहाल, संकटा मन्दिरमा शनिबार दर्शनार्थीको निकै भीड लागेको छ । त्यहीँ एक छेउमा केही स्थानीय बूढापाका गफ गरिरहेका छन् । विषय रहेछ, खुम्चिइरहेको टुँडिखेल । उनीहरूको चिन्ता थियो, संकटासँग सिधा सम्बन्ध रहेको टुँडिखेल दिनदिनै खुम्चिँदै छ । अतिक्रमणले थिलथिएको छ । कुनै दिन टुँडिखेलकै अस्तित्व हरायो भने ? मन्दिरमा भीड लागेर मात्र के मजा, टुँडिखेल नै रहेन भने ?
प्रश्न संकटाको मात्र होइन । टुँडिखेलबिना समग्र काठमाडौंकै कल्पना गर्न सकिएला ? अहिले जसरी टुँडिखेलको जग्गामा अतिक्रमण भइरहेको छ, यो क्रम यसैगरी जारी रह्यो भने एक दिन टुँडिखेल हराएर जाने निश्चित छ । त्यतिबेला यो काठमाडौं वास्तवमै काठमाडौं रहनेछ त ? संकटाका स्थानीय बूढापाकाले यही प्रश्न उठाए । उनीहरू भन्छन्, ‘टुँडिखेललाई पुरानै स्वरूपमा ल्याउन सक्ने हो भने मात्र काठमाडौं वास्तविक काठमाडौं हुनेछ ।’
यसमै जोडिन्छन्, गुरुमापा पनि । यी राक्षसी पाराका थिए । केशचन्द्रले नै उनलाई आफ्नो घरमा ल्याएका थिए । त्यहाँ गुरुमापाको ज्यादती बढेपछि उनलाई टुँडिखेलमा राख्ने निर्णय भयो । भद्रकाली नजिकको रूखमा उनको बासस्थान बनाइयो र त्यहाँ उनलाई प्रत्येक दिन खाना पुर्‍याइने वचन दिइयो । त्यो रूख अझै छ, प्रत्येक वर्ष फागुपूर्णिमाका दिन इटुम्बहालबाट त्यहाँ खान पुर्‍याउने चलन कायम छ ।
टुँडिखेल पुर्‍याइएपछि गुरुमापाले सोधेछन्, ‘यहाँ मेरो के काम त ?’ उनलाई काम दिइयो, इँटाका तीन टुक्रा कतै जोडिएको देखियो भने त्यसलाई अलग पार्ने । अझै पनि विश्वास छ, टुँडिखेलमा राति तीन टुक्रा इँटा जोडेर राखियो भने भोलि बिहान ती सँगै हुँदैनन् । विश्वास के पनि छ भने, गुरुमापा रहेको रूखको छेउछाउ बच्चाहरू जानु हुन्न ।
फेरि संकटामै फर्कने हो भने त्यहाँ १२ वर्षमा एकपटक गथु प्याखँ (नाच) हुन्छ र त्यसक्रममा ‘देवगण’ का लागि भनेर टुँडिखेलमै बोका छोडिन्छ । देवगणको भूमिकामा रहेकाले त्यो बोकालाई समात्ने गर्छन् । घोडेजात्राको भोलिपल्ट मनाइने ‘पाँहाचह्रे’ पर्वको अवसरमा यही टुँडिखेलमा देवगणबीच चिराग आदानप्रदान गरिन्छ ।
धेरैअगाडि होइन, केही दशकअघिसम्म पनि टुँडिखेल अहिलेको रत्नपार्कदेखि दशरथ रंगशालासम्म जोडिएको थियो भन्ने पुस्ता जिउँदै छन् । विभिन्न नाममा यो पटकपटक टुक्रिँदै आयो । सहिदगेटको बीचको बाटो बनेपछि यो फेरि एकपल्ट टुक्रियो । त्यसयता ठूलो आकारको टुँडिखेललाई ‘ठूलो टुँडिखेल’ भनियो । सेनाले लिएको अर्को छेउको भागलाई ‘सानो टुँडिखेल’ । यही सानो टुँडिखेल भएर भद्रकालीमा पूजा गर्न जाने चलन केही वर्षअघिसम्म कायम थियो । संकटकालमा रोकिएको यो क्रम फेरि सुरु भएको छैन ।
सेनाले सहयोग गर्नुपर्छ
टुँडिखेल कतै राज्यको कब्जामा त कतै माफियाको कब्जामा छ । त्यो कब्जाबाट मुक्त गर्ने महत्त्वाकांक्षी अभियानमा जुटेका हौं । पहिलो चरणमा सफाइ गर्नेदेखि पार्किङ हटाउनेसम्म काम हुनेछ । दोस्रो र तेस्रो चरण अलि जटिल हुनेछन् । धेरै भौतिक संरचना सेनाले बनाएको छ । सेना पनि जनता नै हो । भोलि रिटायर्ड भएपछि सेना जनता नै हुने हो । त्यही भएर जनताको खुला ठाउँ खाली गर्न सेना पनि लाग्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।
संयोजक, अकुपाई टुँडिखेल
टुँडिखेल बालबालिकाको खेल्ने ठाउँ र बूढाबूढीका लागि थकाइ मार्ने थलो हो । आपत्विपत् पर्दा ओत लाग्ने ठाउँ पनि यही हो । पछि आएर यो राजनीतिक थलो बन्यो । खुलामञ्च नभएको भए ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तन हुँदा भाषण गर्ने ठाउँ नै हुने थिएन । यो राजधानीवासीले स्वच्छ हावा लिने ठाउँ पनि हो । काठमाडौं बस्नलायक मात्र होइन, हेर्नलायक ठाउँ पनि बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा अभियानको सुरुवात हो, अकुपाई टुँडिखेल ।
बालबालिका कहाँ खेल्ने ?
काठमाडौंको सम्पदाबारे विश्वभर चर्चा छ । हाम्रा सम्पदा अध्ययन गर्न विदेशी आउँछन् । तर हामी त्यही सम्पदा मासिरहेका छौं । टुँडिखेल कामको तनावबाट मुक्त हुने र हाम्रा बालबालिका रमाउने ठाउँ हो । यही ठाउँ अहिले कुरूप भएको छ । अब कहाँ खेल्ने हाम्रा बालबालिका ? ज्येष्ठ नागरिक कहाँ सुस्ताउने ? अब बोल्नुपर्ने बेला आयो । अहिले नबोले भोलि गुनासो गरेर हुँदैन । त्यही भएर हामी अकुपाई टुँडिखेल अभियानमा जुटेका छौं ।
– विराजभक्त श्रेष्ठ
टुँडिखेल यतिमात्रै होइन
खुला ठाउँ मासिएर हामी उकुसमुकुस भइसक्यौं । यो अभियान रानीपोखरीदेखि दशरथ रंगशालासम्म खुला गर्ने अभियान हो । धेरैलाई टुँडिखेल भनेको सहिदगेटभन्दा उत्तर र खुलामञ्चभन्दा दक्षिण भन्नेमात्रै परेको छ । त्यतिमात्र होइन । रानीपोखरीदेखि त्रिपुरेश्वरसम्मको भूभाग फिर्ता ल्याएर पुरानै अवस्थामा खुला ठाउँ बनाउन हामी दबाब दिनेछौं ।
सम्पदा संरक्षण अभियन्ता
सार्वजनिक जग्गामा मनपरी
मालपोत ऐनले सरकारी जग्गा र सार्वजनिकबीच फरक भएको स्पष्ट गरेको छ । सार्वजनिक जग्गामा व्यक्तिको हक लाग्छ, सरकारी जग्गामा सरकारको । सरकारले सार्वजनिक जग्गामा मनपरी गर्न पाउँदैन । टुँडिखेल सार्वजनिक जग्गा हो । संविधानको धारा ४८ ले सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्नु व्यक्तिको कर्तव्य हो भनेको छ । त्यहीअनुसार हामी सार्वजनिक सम्पत्ति रक्षा गर्न आएका छौं ।
टेबहालमा संकटा देवी छन् भने भद्रकालीलाई तिनकै पीठ मानिन्छ । भद्रकालीछेउ टुँडिखेलभित्रै कुलपूजा सकेर भोज खाइरहेकाहरू अझै भेटिन्छन् । ‘टुँडिखेलसँग हाम्रो धर्म, संस्कृति सबै जोडिएका छन्,’ स्थानीय इन्द्रमान तुलाधर भन्छन्, ‘टुँडिखेल कायम भएमात्र ती बच्ने हुन्, नत्र सबै हराएर जानेछन् ।’
टुँडिखेलको सम्बन्ध काठमाडौंसँग धार्मिक र सांस्कृतिक मात्र छैन । भित्री काठमाडौंमा त्यस्तो पुरानो पुस्ता छैन होला, जसले टुँडिखेलमा गएर फुटबल खेलेको नहोस् । कुनै समय नेपाली फुटबलमा काठमाडौंका खेलाडीको वर्चस्व थियो र यसको कारण थियो, यही टुँडिखेलमा फुटबल खेलेको पुस्ता । यसमै पर्छन्, ज्ञानीराजा श्रेष्ठ । कहलिएका खेलाडीमात्र होइन, उत्तिकै नाम चलेका यी रेफ्री टुँडिखेलमै फुटबल खेलेर हुर्किएका हुन् । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो लागि टुँडिखेल सबथोक हो ।’
अचेल नेपाली फुटबलमा काठमाडौंका स्थानीय खेलाडी छैनन् भन्दा हुन्छ । यसको एउटा कारण हो, टुँडिखेल खुम्चिँदै जानु र यहाँ फुटबल खेल्ने परिस्थिति नहुनु । त्यतिमात्र होइन, काठमाडौंमा क्रिकेटको जग बसेको पनि यही टुँडिखेलमै हो । अहिले नेपाली क्रिकेट जहाँ पुगेको छ, त्यसको एक कारण ठूलो टुँडिखेल नै हो ।
टुँडिखेल काठमाडौंवासीका लागि करसत गर्ने र शरीर तन्काएर खुलाठाउँमा सास फेर्न पाउने ठाउँ हो । साढे चार वर्षअघि भूकम्प आउँदा भित्री काठमाडौंवासीले अरू सोचेनन्, अधिकांश हतारहतार टुँडिखेलतिरै लागे । केही समय टुँडिखेल उनीहरूका लागि आश्रयस्थल बन्यो । सांस्कृतिक चाडपर्व होऊन् वा ठूला उत्सव र आयोजना, ‘कस्मोपोलिटन’ काठमाडौं टुँडिखेलकै शरण परेको हुन्छ– कहिले योग सिक्न त कहिले फुड फेस्टिभलका नाममा ।
प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ ०९:०४